दलित विद्यार्थीलाई कोठा पाउनै मुस्किल « Anumodan National Daily
पढाईको शिलशिलामा घरभन्दा टाढा जाने विद्यार्थीलाई धेरै समस्या छन् । उनीहरूलाई सबैभन्दा बढि डेरा खोज्नै समस्या हुन्छ । डेरा पाइए पनि अधिकांश घरधनीले नालीबेली खोतलेर मात्रै दिन्छन् । सबैभन्दा बढि सोधिने प्रश्न भनेको– तपाईको जात के हो ? मैले पनि धेरै ठाउँमा डेराका लागि कोठा खोज्दै गर्दा अधिकांश घरधनीबाट यही प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ । यो प्रश्नले के संकेत गर्दछ भने दलित समुदायका विद्यार्थीले कोठा पाउन निकै कठिन छ ।
भाडामा कोठा खोज्न जाँदा अधिकांश घरधनीले कोठा खोज्न आउने व्यक्तिसँग दुव्र्यवहार गरेका पनि धेरै उदाहरण धेरै छन् । सबैभन्दा बढि दलित समुदायका विद्यार्थीले यस्तो समस्या झेल्नु परेको छ । उनीहरूले कोठा खोज्न जाँदा घरबेटीको गालीगलौच समेत सुन्नुपर्ने अवस्था छ । परिचय नदिँदासम्म कोठा भाडामा भए नपाइने र परिचय दिँदा अनेक बहाना बनाएर कोठा नदिने जहातहीँ प्रवृत्ति छ । यसको मारमा सबैभन्दा बढि दलित समुदायका विद्यार्थी परेका छन् । उनीहरू मानसिक तथा सामाजिक दुवै समस्या खेप्न बाध्य छन् । एर्कातिर पढाइको चिन्ता अर्कोतर्फ कोठा भाडामा नपाइने दलित समुदायका विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
शिक्षित तथा धनी व्यक्तिको बसोबास बढि हुने शहरमा नै यो समस्या विकराल छ । प्रदेश नम्बर सातको सन्दर्भमा दलित विद्यार्थीहरूको प्रमुख समस्याका रूपमा भाडामा कोठा नपाउनु हो । यो समस्याका कारण अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल नगर्ने तथा बीचैमा पढाइ छोड्ने गरेका छन् । जसको परिणाम दलित समुदायका विद्यार्थी माथिल्लो कक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउदैनन् । यसले के संकेत गर्दछ भने अझैं पनि कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
वर्षौं पूरानो रुढिवादी कूप्रथा हटाउनका लागि दलित समुदायबाट चुनाव जितेका व्यक्ति जागरुक नहुँदा अहिलेसम्म पनि दलित समुदायले समस्या भोग्नु परेको हो ।
दलित भएकै कारण सजिलै कोठा भाडामा नपाउने समस्या त छदैछ । कोठा भाडामा पाए पछि दुव्र्यवहार खेप्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । म पनि कोठा भाडामा लिएर लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको छु । कोठा भाडामा लिएरै मैले अध्ययन गर्न थालेको ६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा मैले याद भएसम्म सात पटक डेरा सारे हुला । म दलित समुदायको विद्यार्थी होइन । तर, कोठा पाउन साह्रै कठिन भयो । यदि दलित विद्यार्थीले आफ्ना जात भनेर कोठा खोज्न गयो भने कति समस्या भोगिन्थ्यो होला । यसको कल्पना गर्न सकिन्न । अधिकांश ठाउँमा कोठा खोज्न जादा धेरै घरधनीले ‘कोठा त छ, तर जात के होला ? भनेर सोध्छन् । यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै कताकता मनमा
नमिठो लाग्छ । शिक्षित तथा धनी व्यक्तिको जनघनत्व बढि भएको ठाउँमा त यस्तो अवस्था छ भने गाउँमा कस्तो अवस्था होला ?
दलित समुदायका अधिकांश विद्यार्थीले थर परिर्वतन गरेर मात्रै कोठा भाडामा पाउने गरेका छन् । दलित समुदायका घरधनीले ब्राह्मण, क्षेत्री तथा अन्य जातिका व्यक्तिलाई कोठा भाडामा दिने गरे पनि उनीहरूले चाही किन दलित समुदायका व्यक्तिलाई कोठा भाडामा दिन आनाकानी गरेका होलान् ? यसको मूल कारण भनेको मानिसको संकुचित सोच नै हो लाग्छ ।
शिक्षित वर्गको बसोबास बढि भएका शहरमा पनि जातीय छुवाछूत व्याप्त छ । छुवाछूत प्रथा विगतमा जस्तो नभए पनि विद्यार्थीलाई कोठा खोज्ने समस्यामा भने परिर्वतन आएको छैन । अझै पनि दलित समुदायका विद्यार्थीलाई डेरा खोज्न त्यत्तिकै चूनौति छ । सरल भाषामा भनौं– अहिलेसम्म पनि अधिकांश गैर–दलित समुदायमा छुवाछूत हटाउनु पर्छ भन्ने चेतना पुग्न सकेको छैन । यसले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कोठा पाउन चूनौति कायमै रहेको हो । धेरै शिक्षित तथा गैर–दलित समुदायका व्यक्ति मुखमा एउटा कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने दलित समुदायबारे तथानाम गाली गर्ने गरेको पाइन्छ । अझै पनि उनीहरूमा गहिरो तरिकाले शैक्षिक चेतना पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माण तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने ओहोदामा पुगे पनि दलित समुदायका समस्याबारे गैर–दलित समुदायका अधिकांश शिक्षित व्यक्तिले बुझ्न सकेका छैनन् । जसकारण, अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्ति विभिन्न सामाजिक तथा मानसिक समस्या खेप्न बाध्य छन् ।
दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नीति निर्माण गर्ने तहमा थुप्रै व्यक्ति पुगेका छन् । उनीहरूले पनि गैर–दलित समुदायका व्यक्ति जसरी नै पदमा पुगेपछि समस्या हल गर्न चुकेका देखिन्छन् । वर्षौं पूरानो रुढिवादी कूप्रथा हटाउनका लागि दलित समुदायबाट चुनाव जितेका व्यक्ति जागरुक नहुँदा अहिलेसम्म पनि दलित समुदायले समस्या भोग्नु परेको हो । गैर–दलितले दलितलाई हेप्ने प्रवृति अझै पनि कायम छ । धेरै गैर–दलितले दलित समुदायलाई अहिले पनि गाउँघरमा हाकाहाकी डुम, कलौंत लगायत अपमानित शब्द भनेर बोलाएको सुन्न पाइन्छ । अहिले पनि यस्तो शब्द प्रयोगमा रहि रहनुमा सबैभन्दा ठूलो चूनौति भनेको चेतना अभाव नै हो । कानुनमा यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा सजाय भोगिन्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि यसबारे अधिकांश व्यक्ति सचेत छैनन् ।
दलित समुदायका व्यक्ति पनि आफू दलित भएकोमा गर्व गर्न चाहदैनन् । शिक्षित भएपछि पनि दलित समुदायका व्यक्ति सबै ठाउँमा आफ्नो जात भन्न रुचाउँदैनन् । यस कारण पनि अझै जातीय विभेद न्यून हुन सकेको छैन । राज्यबाट विगतभन्दा दलित समुदायलाई सेवासुविधा प्रदान भने गरेको देखिन्छ । संविधान मै उल्लेख गरेर सो समुदायलाई प्राथमिकता दिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेद कम हुनसकेको छैन । समाज परिर्वतनको मार्गमा हिड्दै गएको छ । सबै नागरिक शिक्षित बन्दै गएका छन् । त्यही अनुसार जातीय विभेद पनि कम हुँदै गएको छ । तर, जुन गतिमा परिर्वतन हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
दलित समुदायका अधिकांश वस्ती विभिन्न विकास पूर्वाधारबाट बञ्चित छन् । यस पछाडिका प्रमुख कारण राज्य उदाशिन हुनु, गरिवी तथा अशिक्षा नै हुन् । यदि यी कुरा पूरा भएमा दलित समुदायले जातकै नाममा हेपीनु पर्ने व्यवहार खेप्नु पर्ने थिएन कि !
दलित समुदाय भित्र पनि जातीय विभेद पाइन्छ । विभिन्न तह रहेका छन् भनिन्छ दलित भित्रै पनि । थर–थरविच विभेद छ दलित भित्र पनि । यस कारण पनि अधिकांश क्षेत्रमा दलित भन्ने शब्दलाई सम्मान दिइएको पाइदैन । दलित समुदाय भित्रकै विभेद जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म दलित भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो महसुस हुन्न । सगर्व यो शब्दलाई उच्चारण गर्नका लागि यस्ता कुव्यवहार तथा कुसंस्कृति जडो देखि नै फ्याक्नु पर्छ ।
मान्छेले मान्छेलाई अर्को दर्जाको नागरिक ठान्नु कदापी राम्रो होइन । गैर–दलितले दलित समुदायलाई हेप्ने परम्परा अझै विद्यमान रहेकाले यसको अन्त्यका लागि शिक्षित व्यक्ति जागरुक हुन जरुरी छ । दलित भन्ने शब्दलाई घृणा होइन ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत जात जस्तै सम्मान तथा गर्व गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा फरक–फरक जातजातिका व्यक्ति बस्छन्, फरक चालचलन तथा भेषभुषा छ त्यस कारण पनि त नेपाल साझा फूलवारी भएको होला । हामीले बढि जातजाति भएकोमा गर्व महसुश गर्नुपर्छ । जातकै नाममा एउटाले अर्कोलाई हेप्नु मानवीय दायित्व होइन् । मानव सचेत प्राणी भएकाले सहि कार्य मात्रै गर्नुपर्छ ।
बढ्दो जातीय छुवाछूतका कारण विद्यार्थीलाई मात्रै नभइ काम विशेषले कतै टाढा गएर बस्नुपर्ने व्यक्तिलाई पनि निकै समस्या छ । दलित समुदायका व्यक्तिलाई कोठा तथा घर भाडामा नदिने गरेकाले काम गर्न पीडा हुने गरेको विभिन्न संघ–सस्थाका प्रतिनिधिको भनाई छ । घरबाहिर गएर अफिसको काम गरौं भने दलित भनेर कोठा बहालमा नपाइने, घरधनीसँग थर ढाँटेर कोठामा बस्दा कुन दिन थाहा पाएर घरधनीले निकाल्ने हुन् भन्ने चिन्ताले कार्यालयको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत
(कसुर र सजाय) ऐन–०६८ मा ‘कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गरेको पाइए जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको मानिने र कारबाहीको भागीदार हुने बताइएको छ ।
ऐन कानुनमा जे लेखे पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको देखिदैन । कागजी रूपमा नीतिनियम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समाजबाट छुवाछूतको जरो हट्न अहिलेसम्म सकेको छैन । व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, सार्वजनिक ठाउँमा समेत दलित छुवाछूतको मारमा छन् । धार्मिक तथा अन्य नाममा दलित समुदायलाई सार्वजनिक सभासमारोहमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रचलन अझै व्याप्त छ । घर बहालमा नदिने व्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा हुन सक्छन् । तर, जातकै आधारमा कसैले कसैमाथि अपमान गरेर छुवाछूत गर्नुहुन्न ।